Waxaa jiray xiliyo hore ah, Marka dadka kamidka sugayay warqado u maqalka ka kuugu dhow iyo curiso, ka dibna soo hal-abuurka ee foomka of technology, da'da iyo emails gaaban Fariin Service (SMS). Zaman Tani waxay u dhaqmeen sida dhagax dhigay hindisooyin kale oo badan iyo tabo cusub marka la eego xidhiidhka degdeg ah la technology caawimaad ku laayeen goynta. Qalab SMS waa mid ka mid ah muuqaalada aasaasiga ah, laakiin lagu kalsoonaan karo oo weligeed ah ee telefoonka wax gacanta, iyada oo dadka isticmaala xitaa arinku soo awoodi iyo helayaan farriin qoraal ah oo fudud. Iyadoo casriga ah, sida macnaha cusub ee nolosha maalin joogo, waxaan oo dhan jecel yahay in uu sii joogo lala saaxiibada iyo qoyska iyo barnaamijyadooda heli Fariin sida isha ugu wanaagsan ee ay u qabanayaan.
In lingo farsamada casriga ah, ereyga "app 'waa ugu dambeeyay oo dheeraad ah. Wax kasta oo ay taasi dhacdo maanta dhacaya daqiiqad; in qaabka cusub ee isgaarsiinta iyo barnaamijyadooda fariin, taas oo lagu shakhsi iyo in la hagaajiyo si ku salaysan maalin walba mahad.
2.Built-in Android Fariin Apps
2.1 Hordhac Android
Ka dib markii ay suuqa telefoonnada gacanta ka buuxiyey dad caan ah aaladaha "casriga ah", barnaamijyadooda iyo aad u badan ayaa la abuuray maalin kasta, si loo waafajiyo baahida casriga ah ugu xeel dheer dadka. Iyadoo isgaarsiinta, noqday lagama maarmaan u ah qof walba, haatan, taasoo keentay in suuqa casriga ah waa ugu duulaya Phones Android. Madax markab xambaarsan casriga manufactures sida HTC ah, Samsung, Google iyo LG, oo ay taageerayaan la kala duwan ee qalabka kharash yar sababta oo ah il furan, waxaa loo baahan yahay in ka badan suuqa Android badan abid. Android casriga ah waxaa ugu dalbaday in suuqa iyo Qoomkii Tubbac, ayaa qabtay dadka dareenka.
Waxa kaliya oo ahaa Android casriga ah ku salaysan kibirlow kale casriga ah waa dabacsanaan si ay u beddesho sida la tixgelinayo shuruudaha la user ee. Waa arrin cad in codsiyada Fariin android ku salaysan is beddeleen aragtida oo dhan ee adduunka oo ayaa weli waddo dheer si ay u tagaan marka la eego soo socda la muuqaalada cajiib ah in update software kasta.
2.2 dhisay-in functionalities Fariin Apps
Waa maxay app Fariin kasta samayn doono, in ay u diraan fariin qoraal ah oo kaliya, inkastoo saaraha kasta oo dalkeeda ku beddelo heerarka Customization, sidaasi darteed waxaa jira feature aad u badan oo ka baxayso u isticmaala si gaar ah ee Android ku salaysan casriga ah. Google, Nexus caan ku yihiin barnaamijyadooda fariin dhisay-in. Google waxay ku daray tagi; Adeeg IM iyo SMS, galay Android si aad awoodo fariin oo dhan Google (oo aan Google) saaxiibo. Inta badan Android casriga ah ayaa sidoo kale la iman app gaar ah SMS (sida qalabka Nexus xaqa u leeyihiin tagi).
Android casriga hadda ka kooban yahay ku dhowaad dhammaan functionalities ee isgaarsiinta ee foomka of barnaamijyadooda fariin, taas oo qofka bini'aadamka ah qabaa karaa. Inta badan Android casriga ah la iman app ah SMS gaar ah ama waxaad kala soo bixi kartaa App Store. Providentially, waxaa jira kala duwanaanta ee Chine fariimaha kala duwan, kuwaas oo laga heli karaa App Store ah. Haddii aan iibsan cusub Android casriga ah, ama waxaa heshiis ku salaysan, waxaan doonayaa in la hubiyo in aan helno ugu fiican barnaamijyadooda functionalities Fariin diyaar u ah isticmaalka.
2.3 Faa'iido Heer Sare iyo Qasaarooyinka dhisay-in Rasuulka Apps
Faa'iidooyinka Android App
Qasaarooyinka Android dhisay-in Message App
1 Google waa hodon ku hawsheeda Gmail, mid ka mid ah in uu leeyahay soo diyaariyeen cajiib ah muuqaalada sida ku dheggan iyo sida diirada. Customization la'aan sida aqoonsiga, mararka qaar wehel liiska iwm
2 Waxaa la dhisay-in-ada Rasuul leedahay kaydinta weyn taasoo la micno ah in aad marnaba u leeyihiin in ay tirtirto wax Xitaa dadka isticmaala khibrad casriga ah in ay ka shaqeeyaan sidii ay u soo diraan qoraalka fudud ku dhibtooday.
3 Iyada oo ka shaqeynayaan xadidan app dhisay-in fariimaha, waxaa ku adkaan karta in la ogaado sida saxda ah kan ugu wanaagsan ee adiga iyo saaxiibadaa inay la xiriiraan.
4 U baahan diiwaangelinta iyo dad badan oo ka hor shuruudo.
5 Google oo xiiso leh cusub Android 4.4 KitKat sii daayo yimid taasoo keentay in casriyaynta lagu qasbay in ay isticmaalaan Google ee u gaarka ah app tagi sida app SMS caadiga ah.
3.Top 5 Android Rasuulka App
Magaca Rasuulka App
1 Buug Waji Rasuulka 12.2 MB Free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca 4.2 / 5
2 Viber 20,18 MB Free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip 4.3 / 5
3 WhatsApp 14,57 MB Free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp 4.4 / 5
4 Skype 17,55 MB Free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider 4.15
5 KIK Rasuulka 12,14 MB Free https://play.google.com/store/apps/details?id=kik.android 4.15
3.1 faahfaahin App
Buugga 1 Waji Rasuulka:
Tani waa mid ka mid ah technology ugu joogta ah loo isticmaalo chat ee Facebook madal shabakadaha bulshada, taasoo u ogolaatay dadka isticmaala Facebook in ay isticmaalaan xarunta chat ee bogiisa bulshada in ay xirmaan saaxiibadaa iyo xubnaha qoyska ee guud ahaan dunida dacaladeeda.
Viber ka dhigaysa mid xaqiiqo ah heshiis ugu soo jiidashada badan, sida taleefan oo lacag la'aan ah iyo fariimaha. On Viber, aad ID waa lambarka telefoonka aad. App ayaa si toos ah ogaadaa oo ka mid ah xiriirada aad la isticmaalayo Viber ka dib markii synching liiska xiriir taleefanka gacanta. Viber gebi ahaanba waa freeware, la xayeysiin.
Viber Media ayaa kaliya bilaabay edition ay desktop u ogolaanaya user in lagu sheekeysto iyada oo desktop aan isticmaalaya taleefannada casriga ah ka dib syncs xiriirada ka qalab casriga aad. Viber ka shaqeeya labada 3G iyo Wi-Fi, oo ilaa hadda la helay 200 milyan oo dadka isticmaala. Vibers aad buu u noqday caan ah oo ka badan dhufto ee badan, oo ay leeyihiin sifooyinka sida adeega chat group iyo yeedhidda, sarrifka qoraalo, sawiro iyo Fariin video, abuse wac, xiriir iyo rada. Waa la heli karo 30 luqadaha sida Ingiriisi, Carabi, Faransiis, Faarsi, Talyaani, Isbaanish, Jarmal iyo qaar badan.
Waa in uu leedahay app oo soo diri kartaa fariimaha qoraalka ah, sawirada iyo fariimaha codka. App helay qaabka aasaasiga ah sida karoos codsiga mobile u ogolaanaya Fariin meel qof kasta madal,. Iyadoo in ka badan 300 milyan oo dadka isticmaala dadka, app u baahan yahay hordhac yar tan iyo markii ay muran la'aan waa app fariimaha ugu caansan dunida. Hooyooyinka; aabayaasha, grandmas iyo granddads xiriiri kartaa mid aad si xor ah ku WhatsApp.
Rasuul Tani waa mid ka mid ah qalab inta badan la isticmaalo adduunka. Isticmaalka si fiican la isugu gudbiyo ee telefoonada smart meesha fariimaha deg dega ah ayaa laftiisa ka dhigtay qayb ka mid ah nolosha qof kasta. WhatsApp waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo caan ah oo ku filan in inta badan saaxiibadaa.
Skype waa ka badan oo kaliya adeega video iyo cod yeedhayso la Skype caadadiisu soo diyaariyeen ee smileys samaynta jidkooda ka badan. Iyadoo fariimaha deg dega si buuxda u taageereen, oo ay la socdaan fariimaha group iyo qaybsiga files warbaahinta iyo fariimaha video. Haddii qalab aad kaamaro hore ka dibna ku raaxaysan live video chat. Shirka oo ilaa 25 qof waxaa la samayn karaa iyada oo loo marayo Skype, kaas oo wax looga qabto loo baahan yahay ganacsiga. Wacaan cod iyo fariimaha deg dega ah si ay qof kasta ku Skype oo taageera dhufto badan oo ay ka mid yihiin Android. Shabakadda waxaa ka shaqeeya Microsoft iyo qaababka ay sida file sharing ie iyo duantahay, Skype si Skype wicitaanada waa lacag la'aan. Inkasta oo qarashka ugu yeeray inay soo diro iyo taleefanka gacanta waxaa laga qaadaa iyada oo loo marayo nidaamka xisaabta debit ku salaysan. Skype laguu oggollaan-in karaa iyadoo la isticmaalayo username iyo password u gaar ah ama iyada oo an account jira Microsoft. Tan iyo darsanka la Microsoft, waxaa u ogolaanaya in ay xiri wax xisaab Skype jira in aad xisaabta Windows. <
Tani Fariin qalab shakhsi ahaaneed waa mid ka mid ah barnaamijyadooda Rasuul ugu kulul ee taariikhda casriga ah. Waxaa jira resemblances badan oo WhatsApp, sida awood u leeyahay inuu soo diro sawiro, waxay leeyihiin CHAT kooxda, iyo sidoo kale ay awoodaan in ay raadiso links YouTube iyo, sawirada. Users sidoo kale abuuri kara iyo diri memes kala duwan ka gudahood KIK, ama "Photobomb" saaxiibadaa.
Iyadoo in ka badan 80 milyan oo isticmaala, KIK waa app kale oo aan la dafiri karin oo ay caan. KIK ayaa sidoo kale sheeganaya in aad shaqsi ah iyo kuwa gaarka ah, oo aan lahayn si ay u wadaagaan mid ka mid ah macluumaadka shakhsiga ah, halkii username ah in aad abuuri karaan iyo sida loo isticmaalo.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka Samsung Galaxy
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Motorola
Sidee loo Diiwaan Rdio Music Google Music Library
> Resource > Android > Top 5 Android Rasuullo in Download